Chicken umgquba omiswe umatshini
Isomisi somgquba wenkukhu ikakhulu senziwe ngesixhobo esikhulu sokomisa (kubandakanya umzimba ojikelezayo, ipleyiti yokuphakamisa, isixhobo sokuhambisa, isixhobo esixhasayo kunye netywina lokutywina kunye nezinye izinto) kunye nesixhobo sokuhambisa uthuli somoya. Umzimba ongundoqo wokomisa isilinda othambekele kancinane kutye tyaba. Izinto ezidityanisiweyo zongezwa ukusuka esiphelweni esiphezulu, kwaye iqondo eliphezulu lobushushu obushushu bokufudumeza ubushushu buqukuqela buye kwicala lesilinda ecaleni kwento leyo. Ngokujikeleza kwesilinda, izinto zibaleka ziye kwinqanaba eliphezulu ngenxa yesenzo somxhuzulane. Isiphelo esisezantsi. Ibhodi yekopi ifakwe kudonga lwangaphakathi lwesilinda ukuze kuthathwe kwaye kufafazwe imathiriyeli ukunyusa umphezulu wonxibelelwano phakathi kwento kunye nokuhamba komoya ukunyusa izinga lokomisa kunye nokukhuthaza ukuqhubela phambili kwemathiriyeli. Imveliso eyomileyo iqokelelwa emazantsi ezantsi.
Chicken umgquba isomisi i-eneji yamandla asezantsi, izixhobo zokusebenza zokumisa eziphezulu, ezisetyenziswa kakhulu ekomiseni ngokukhawuleza kokufuma okuphezulu kwezinto zokulahla inkunkuma kwimfuyo kunye nokufuya iinkukhu, ukupheka, iswekile, ukwenza iphepha kunye namanye amashishini, kwaye unokunciphisa umxholo wokuqala wokufuma ukuya kuthi ga ngaphantsi kwama-70% Izinto ezinomswakama ophezulu ziyomiswa ngaxeshanye ukuya kumxholo wokugqibela wokufuma ongaphantsi kwe-15%, ukufezekisa injongo yokomisa ngokukhawuleza kunye nokulondolozwa kwezondlo ngexesha elinye.
1.Sebenzisa kunye neempawu:
Isomisi somgquba wenkukhu sikulungele ukomisa ngokukhawuleza izinto ezinomswakama ophezulu ezifana nesichumiso sezinto eziphilayo, intsalela yombona, intsalela yamayeza, intsalela ye-vinasse, ipomace kunye nedlelo emva kokuvumba. Inokonyuka komphunga kunye nokusetyenziswa kwamalahle asezantsi. , Izibonelelo zokusebenza kokumisa okuphezulu. Isixhobo sokwenza inkunkuma eyomeleleyo kumasipala kunye nokomiswa kwelindle.
Iimpawu zezixhobo: uyilo lwenoveli, ubumbano lwentsebenzo, ukusebenza ngokulula, ukusebenza ngokuma okuphezulu, iindleko zokusebenza eziphantsi, indawo encinci yonyawo; Igubu lixhotyiswe ngesantya esiphezulu esijikelezisayo isixhobo sangaphakathi, esonyusa indawo yokunxibelelana phakathi kwento kunye nendawo yokumisa, kunye nobushushu bunokutshintshiselana ngokwaneleyo ngobuninzi, ukulondolozwa kobushushu okuhle kunye nokutywinwa, kwaye ukusebenza kwayo ngokufudumeleyo kuphezulu kakhulu kune ezomisa igubu eziqhelekileyo. Zombini igubu kunye nesixhobo esityumkileyo samkela umgaqo wesantya esinganyatheliyo, onokuziqhelanisa neemfuno zokomisa izinto ezahlukeneyo.
Izinto zokufuma okuphezulu zithunyelwa ngqo kwindawo yokomisa inkuku sisomisi sokuhambisa, kwaye iphindaphindwe yaphakanyiswa yaza yasasazwa yipleyiti yokukhuphela eludongeni lwangaphakathi lwegubu. Emva kokuqhekeka ngesixhobo esityumkileyo, loo nto ibonakaliswe ngokupheleleyo kubushushu obuphakathi obuphantsi koxinzelelo olubi. Nxibelelana ukuze ugqibe ubushushu kunye nenkqubo yokutshintshiselana ngobuninzi. Ngenxa ye-engile yokuthambekela kwegubu kunye nesenzo se-fan yoyilo olwenziweyo, izinto zihamba kancinci ukusuka esiphelweni sesondlo, kwaye zikhutshwa sisixhobo sokukhupha emva kokuma. Irhasi yomsila ikhutshwa ngumqokeleli wothuli emva kokuba uthuliwe.
TYPE I-D-25 I-D-38
AMANDLA KW 7.5kw 15KW
AMANDLA OKWENZIWA kokomisa inkunkuma KG / H 40-50kg / h 80-120KG / H.
IXESHA LOKUTHUTHA IINTSUKU ezingama-25 35IINTSUKU
INDAWO YOKUSEBENZELA NOKUKHENKETHA
Isahluli seNkunkuma eSahlulayo
Iscrew Press sokuhambisa amanzi kumatshini